UPDATE :-Dowladda Britain oo Ciidamo cusub u diraysa Somalia xili,,,, | Kismaayo24 News Agency
UPDATE :-Dowladda Britain oo Ciidamo cusub u diraysa Somalia xili,,,,
Saturday September 10, 2016 - 7:34 under Breaking News by admin
Dowladda Britain, ayaa sheegtay ciidamo ka socda dalkeeda inay u soo direyso gudaha dalka Somaliya, xilli kol hore ay balan qaaday arintaasi.
Tobias Ellwood, oo ah Wasiirka Ingiriiska u qaabilsan Bariga dhexe iyo Afrika ayaa sheegay in dalkiisa ay ciidamo ka joogaan dalalka Somaliya iyo Koofurta Sudan isla markaana uu ciidamo cusub u soo dirayaan.
Wasiirka waxaa uu sheegayaa in ilaa 300 oo ciidan oo Ingiriis ah ay joogaan dalka koofurta Sudan halka Somaliya ay joogaan ilaa 40 oo dowladda Somaliya ka gacan siiya waxa loogu yeero la dagaalanka argigixisada. Dalka Koofurta Suudaan ayaa codsaday in dalkaasi u baahan yahay ilaa 4,000 oo nabad ilaalin ah si wax looga qabto nabad-galyada dalkaasi.
“Markii aan booqday Somaliya waxaan indhaheyga ku arkay in nabad-galyo la’aan in wax walbo oo hor-umar ah oo la gaaray la lumin karo, waxaa lagama maarmaan ah in ciidamada Soomaalida ay la shaqeeyaan Amisom, iyaggoo si tartiib tartiib ah ula wareegaya mas’uuliyadda nabad galyada iyo xaisloonida dalka.” Tobias Ellwood
Hadalkan waxaa la sheegayaa in uu la sheegay shir wasiirada difaaca in ka badan 80 dal ay ku yeesheen magaalada London.